Akụkọ - Huangyan Yjie zigara 352,700 yuan maka ụmụ akwụkwọ dara ogbenye
N'oge na-adịbeghị anya, Huangyan YJIE Plastics Co., Ltd haziri ndị ọrụ iji mepụta mmemme enyemaka ụmụ akwụkwọ ọla edo 2020. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ọrụ afọ ofufo 50 nke Companylọ Ọrụ ahụ gara ụlọ akwụkwọ ahụ ma zigara ụmụ akwụkwọ dara ogbenye 242 enyemaka na ihe ndị dị n'ụlọ akwụkwọ. Ego niile ha nyere bụ yuan 352,700.
Onyinye ndị a sitere n'aka ndị mmadụ na-elekọta mmadụ na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ n'anya bụ ndị na-akwado ụmụ akwụkwọ n'otu n'otu. Companylọ ọrụ ahụ na-etinye onyinye ahụ na'Weifeng Student Aid Fund 'maka mmejuputa na njikwa, ma na-etinye ego pụrụ iche maka ebumnuche pụrụ iche. Nye enyemaka maka ụmụaka nwere nsogbu ịga ụlọ akwụkwọ, ”
] Na ihe omume ahụ, ndị Ọrụ ọ bụghị naanị na-akpachapụ anya na-arụ ọrụ tupu e nye onyinye ahụ, kamakwa na-agba ndị nnata ume ka ha nwee ekele ma nwee ihe ịga nke ọma na ọmụmụ ha, ma bụrụ ndị nwere ezi echiche.
Mbukota N'ihi Wine Bottle, Plastic Barware, Nri nri nri anụ ụlọ, Barware Set, Nkwado Barware, Unbreakable Barware,